Imango igxeka iWallapop njengeyona ndawo yentengiso yeemveliso zayo ezibiweyo | Iindaba zeGajethi
I-Wallapop ibuyela kwindawo ephambili yolwazi, kwaye kwakhona kungenxa yokuziphatha okungathandabuzekiyo kwenxalenye enkulu yabasebenzisi bayo. Kwaye inyani yokufumana iimveliso ezinamathandabuzo kwimvelaphi esemthethweni eWallapop ayinzima ncam, enyanisweni, yeyona ndawo ikhethwayo amasela ukuba abhengeze umxholo womphango wawo kwaye awulahle ngokukhawuleza. Ke kukho abo bathethathethana nge-25% yexabiso lokwenyani, kodwa ezi ntlobo zabantu zifanelwe uhlalutyo lwengqondo olwahlukileyo ... Ngamafutshane, Ngeli xesha yayiyintloko yezokhuseleko yeMango eyabiza iWallapop ngentengiso esemthethweni yeemveliso ezibiweyo ezivenkileni zayo.
Ukuba iWallapop yenye yeemarike eziphambili zeempahla ezibiweyo eSpain yimfihlo evulekileyo, kwaye ayisiyiyo into yokuba isicelo asinalo amanyathelo okulawula nawokhuseleko, kukuba azizisebenzisi kwezi meko. Umzekelo, eWallapop akuvumelekanga ngokungqongqo ukwabelana ngeentengiso ezinezilwanyana njengezinto zazo, ziyasuswa ngokukhawuleza, kodwa akunjalo ngeempahla kunye nezinto ngaphandle kokuthethelelwa kwemvelaphi. U-Oscar Molins, umlawuli kulawulo lwempahla eMango uthe oku kulandelayo:
“Ngaphambili, izinto ezibiweyo ezivenkileni bezithengiswa kwiimarike zasesitalatweni. Ngoku, zithengiswa eWallapop »
Kwaye ayisiyiyo kuphela indlela, njengoko kubonisiwe Zezifo.es, IArhente yaseSpain yamayeza kunye neMveliso yezeMpilo ikwalumkisa ngokukhula okubonakalayo kwintengiso yamayeza anemvelaphi ethandabuzekayo kolu hlobo lwamaqonga angamasekeni.
Impendulo kaWallapop khange kube kudala eza, echaza kwimithombo yeendaba zaseSpain ukuba iphuhlise ialgorithm yokufumanisa ukuba isetyenziswa ngabathengisi bezinto ezibiweyo ngenjongo yokuthintela ukupapashwa kwazo, nangona yonke into izwakala iyimfihlakalo ukuba ingabonakala iyinyani. Ngeli xesha, I-Wallapop iyaqhubeka nokugcina iqela labantu abangama-20 abajongene nokubeka iliso kuyo yonke into eyenzekayo kwisicelo sayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imango ibiza iWallapop njengemarike yezinto zayo ezibiweyo
Ndicinga ukuba isiphoso asiyiyo iWallapop, kodwa ingumphathi wezokhuseleko weMango, kuba ndicinga ukuba akawenzi kakuhle umsebenzi wakhe omenza ukuba awujonge.